Uthando Nomtshato-Inguqulelo Ye-Arhente | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 8, 2014 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Iarhente yethu, Highbridge, ubekhona ngaphezulu kweminyaka emi-5 ngoku kwaye kutshanje ubhengeze utshintsho lwendlela. Kunyaka ophelileyo, sibanyanzelisile abasebenzi bethu kwaye emva koko sithathe abathengi abaninzi abanzima abaphantse bakhokelela ekufeni kwethu.
Sakhe ubudlelwane obuncomekayo nabathengi abamangalisayo-uninzi lwazo olunathi iminyaka eliqela. Siyabathanda kwaye ndiyathemba ukuba bayasithanda-ayisiyontlawulo nje kuphela, kukuthanda kwethu. Akukho nto isenza sonwabe ngaphezu kokubona abathengi bethu bephumelela, kwaye akukho nto ikhathaza ngaphezu kokuba ubudlelwane buhamba ngendlela engekho mthethweni.
Ndichitha ixesha elininzi ngoku ndisebenza namathemba okuqinisekisa ukuba sobabini sizibophelele kokukhulu Umtshato kwaye bobabini bafuna ubudlelwane obunothando. Ndifuna ukunqanda ukungena kubudlelwane obunengxaki ngazo zonke iindleko- ngaphandle kobungakanani bokuzibandakanya. Ubudlelwane obubi abenzakalisi nje umthengi obandakanyekayo- unokuba nefuthe elonakalisayo kubo bonke abathengi bakho njengoko ixesha lakho namandla ephelile ukuzama ukuhlangula ukubandakanyeka okukhoyo. Ukuba sinokuchonga ezinye zeempawu ezixhalabisayo zabaxumi kwinkqubo yokuthengisa, inokusisindisa sonke ukuba sibe nosizi olukhulu phantsi kwendlela.
Besifuna ukonwaba kwaye sibeke ukukhanya kula maxesha amnyama… ke olu luhlu lubonisa imizekelo yeentlobo zobudlelwane esiye ngelishwa sahamba kuzo! Ukwazisa Uthando noMtshato-Inguqulelo ye-Arhente.
tags: NkonzoUmxhasiuthando nomtshatoUmtshatoulwalamano
Epreli 8, 2014 ngo-11: 33 AM
Ewe! Kudala ndiyilindile leya! Ndiyavuya ukuyibona ekugqibeleni iphuma ukuze ijongwe esidlangalaleni! Uqaqambileyo!
Epreli 8, 2014 ngo-10: 16 PM
Ndicinga ukuba ndikhe ndahlala naba balingane abambalwa, ingaba likhona iqela lonyango elikufutshane?
Epreli 8, 2014 ngo-10: 50 PM
Ndandicinga ukuba yiloo nto esasiyenza veki nganye!
Epreli 11, 2014 ngo-12: 12 PM
okubuhlungu kakhulu yinyani! Wenze kakuhle, ngoku kufuneka wenze imibuzo enokuthi abathengi banokuthi bayithathe ukuze bahluze ngobuchwephesha!
Epreli 20, 2014 ngo-12: 59 PM
UTHANDO NOMTSHATO (I-Arhente Version) - Kumnandi! 🙂